भारतीयले शहरका गल्लीगल्ली पुर्याउने सेवा हामीले गरे… – Nepal Japan
यादब देवकोटा ३० आश्विन १८:३२
भनिन्छ नेपालमा रोजगारी छैन त्यसैले विदेशिनुको विकल्प पनि छैन तर, यही देशको तराईदेखि पहाडसम्म भारतीय कामदार छ्याप्छ्याप्ती छन्– कारण नेपाली युवाहरु उनीहरुले गर्ने काम गर्नै चाहँदैनन् । सरकार पनि युवाहरुलाई काम दिनुको साटो निर्यात गर्नै रुची राख्छ बढी मात्रामा ।
साइकलमा तरकारी फलफूल बेचेर मलेसिया वा अरब मुलुककोभन्दा बढी आयआर्जन गर्नेहरु प्रशस्र्त छन् । उनीहरुको सुझाव पनि यस्तै छ भने अधिकांश युवायुवतीहरुको विदेश मोह हटाउन सरकारी योजना त्यस्तै हुने हो भने यहाँ गरे नहुने केही छैन । यो नेपालीलेभन्दा बढी विदेशीले थाहा पाएका छन् । नेपाललाई माया गर्ने एक चिनीया विद्वानले भनेको कुरा यहाँ मर्मस्पर्शी लाग्दछ । उनले भनेको थिए– “नेपाल सुनको कचौरा बोकेर भीख मागिरहेको छ” । नेपालको वास्तविकता नै यही हो । त्यस्तै केही दशक अघि भारतका एकजना प्राविधिकले कालिमाटीस्थित विष्णुमतिको पुलमुनी मिल्काइएका “कथित फोहोर” देखेर भनेको थिए रे “नेपालमा सुनैसुन खोलामा फालिंदो रहेछ” !
यसको मतलब के हो भने नेपालमा पैसा कमाउन सकिने सबै बस्तु मिल्काइन्छ । कारण स्पष्ट छ– सानोतिनो काम गरे इज्जत जाने ? श्रमको मूल्य र महत्व बुझाउनै सकिएको छैन । यहाँ मेहेनत गर्नुको साटो छलछाम गरेर खाने बानी परेको छ । राज्यको उपल्लो तहदेखि नै यस्तै रोग लागेपछि युवाहरुले के गरुन् । विष्णुमतिको पुलमुनी फालिएका कथित फोहोर मानिएको बस्तु उपयोग गर्ने नीति न राज्यले बनायो, न प्रोत्साहित नै गर्यो ।
(दुई वर्षअघिको नेपालजापानबाट)